Ny "fitsaram-bahoaka" ankehitriny kosa?
Famonoana ho faty na fandratràna mafy izay tratra nanao ratsy ataon'ny andian'olona miforona tampotampoka.Izany hoe, ny "FITSARAM-BAHOAKA fahita ankehitriny" dia TSY INONA FA VALIFATY IARAHAN'OLONA MAROMARO MANAO. Matetika dia tsy misy firindrany izany valifaty izany.Kanefa koa dia indraindray dia TOA misy ny rafitra ara-piaraha-monina mandrindra azy (Ohatra: Ampanjàka, Lonaky, Solombavambahoaka..).
Toy izay niseho tany USA tamin'ny 1837 ka nandrindran'i Charles LYNCH tamin'ny alalan'ny lalàna vorivorika ("loi de LYNCH") ny famonoana izay olona nanao ratsy (ka niavian'ny teny hoe "LYNCHAGE").
Raha fintinina izany dia VALIFATIN'OLON-TSOTRA ("vengeance privée") ity "fitsaram-bahoaka" ankehitriny ity.
Voasazin'ny Lalàna tokoa araka izany ny fandraisana anjara amin'ny "Fitsaram-bahoaka". Raha naratra ilay olona dia mety hiakatra hatrany amin'ny 10 taona an-tranomaizina ("10 ans d'emprisonnement") ny sazy.
Raha maty kosa ilay nanaovana "fitsaram-bahoaka" dia ASA AN-TERIVOZONA MANDRA-PAHAFATY ("Travaux forcés à perpétuité") no miandry izay nanao na nandray anjara tamin'izany.
Ary aoka tsy ho sodoka velively ny tsirairay hoe tsy voasambotra eo noho eo dia efa nilamina izany ny nandraisana anjara tamina "fitsaram-bahoaka" iray.SANATRIA DIA SANATRIA IZANY. Satria araka ny Fehezan-Dalàna momba ny Paikady Heloka ("Code de Procédure Pénale"), dia AZO TORIANA SY ENJEHINA FOANA AO ANATIN'NY 10 taona miantomboka amin'ny daty nitrangàny izay NANAO HELOKA BEVAVA (Ohatra: NAMONO NAHAFATY OLONA).
Izany hoe, izay namono nahafaty olona ny 01/01/2017 dia AZO TORIANA, ENJEHINA KA SAMBORINA FOANA hatramin'ny 01/01/2027.
AZO TORIANA SY ENJEHINA FOANA AO ANATIN'NY 3 TAONA kosa izay nanao heloka tsotra (Ohatra: namono sy nandratra). Koa raha nanapaka tanan'olona ohatra ianao ny 01/01/2017 dia azo toriana ka enjehina sy samborina foana hatramin'ny 01/01/2020.
Ny fisian'ny kolikoly, izay ady lehibe iarahan'ny rehetra manao, manoloana ny mpanolotra na ny mpandray kolikoly, dia tsy tokony hiafenana ka anomezana vahana ny fitsaram-bahoaka.